Nyika ye infographics | Martech Zone
Hurumende ye infographics
Mugovera, January 12, 2013 Mugovera, January 12, 2013 Douglas Karr
Infographics dzakura zvakanyanya mukuda zvekuti ivo vave chikamu chepakati chedu zvipo zvebhizinesi. Makambani ari leveraging infographics vari kuenderera mberi nekuona zvinoshamisa mhedzisiro. Infographics zvinongoitika kuva mubatanidzwa wakakwana wezvinhu zvese zvikuru zveakanaka zvemukati kushambadzira zano:
Data - vanopa ruzivo rwakawanda mupakeji iri nyore kugaya.
patani - kana zvaitwa mushe, zvinofadza uye zvinotonakidza kuverenga.
Kusarudzwa - nekuti iimwe chete faira refaira, ivo vari nyore nyore kugovera.
Social - zvinoonekwa zvinhu senge infographics zvinogoverwa zvakanyanya kazhinji kupfuura zvimwe zvirimo.
kutsvaka - nekuti ivo vanogovaniswa kazhinji, vanowanzo fambisa akawanda ma link kudzokera kune muparidzi, iyo inotyaira injini yekutsvaga.
Nepo paine ruzha rukuru muindasitiri nezve mhando ye infographics inodonha uye iyo frequency ichikura zvakanyanya - ini handina kuona chero kudonha mune zvakanaka infographic inoitira kambani. Dzimwe nguva zvinonetsa kuona kuti infographic ichaita here kana kwete sezvaunoda, asi iyo equation yekubudirira yanga ichienderana nevatengi vedu ... iyo yakadzika uye yakanyatsoita tsvagurudzo, inonakidza nyaya yacho, uye zvirinani iyo infographic yakagadzirirwa inotungamira kune infographic inoita!
Heano akakura infographic pane iyo Mamiriro eInfographic kubva Kumusoro Kwekushambadzira Zvikoro:
Tags: Kushambadzira Infographicsmamiriro e infographics
Zvemukati Kushambadzira mune Yemagariro, Nhare Nyika
Mhedzisiro yeMafoni uye Hwendefa Gifting
Ndira 14, 2013 na5: 45 PM
Koreji mabhuku emabhuku angave anoshanda zvakanyanya maturusi ekudzidza dai peji rega rega raive risina kana chinhu asi infographics. 😉